​​Walitti bu’iinsa Naannoo Kibbaatti uumame tureen namoonni 53 ol ajjeeffamuu ibsame - NuuralHudaa
​​Walitti bu’iinsa Naannoo Kibbaatti uumame tureen namoonni 53 ol ajjeeffamuu ibsame
On Aug 1, 2019 1
Gaaffii ummanni Sidaamaa naannoo tahuuf dhiheeffate hordofuun dhiheenya naannichatti jeequmsi ka’uun ni yaadatama. Walitti bu’iinsa aanaalee godina Sidaamaa gara garaa keessatti uumame kanaan, namoonni 53 ajjeeffamuu odeeyfannoon qajeelcha poolisii godinichaa irraa argame ni mul’isa.
Itti aanaan itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godina Sidaamaa Daanyaachaw Demissee, gabaasa aanaalee godinichaa irraa walitti qabame irratti hundaa’uun, namoonni ajjeefamanii reefi isaanii argame 53 tahuu, akkasumas namoonni madaawan immoo 54 tahu ibse. Komaander Daanyaaw’n itti dabaluudhaanis, lakkoofsi namoota ajjeefamanii fi miidhamanii kana ol tahuu mala jechuun DW’f hime.
Waliitti bu’iinsa Kanaan qabeenyi hedduun akka barabadaa’e fi namoonni 935 jeequmsa keesatti hirmaachuun shakkamanii too’annaa jala oolfamuu Odeeyfannoo ni addeessa.
ItyoophiyaaNaannoo kibbaaZoonii Sidaamaa